Mashoko akaunganidzwa kuburikidza www.itstechschool.com kana www.itstraining.in inochengetwa chakavanzika uye isati yapfuurirwa kune mamwe masangano ekutengesera kana mabasa ekusimudzira.
Kana iwe ukanyorera kana kubvunza pamusoro pebasa redu kana ruzivo rwekambo kuburikidza nesu uye kuti kutsvaga ruzivo kana iwe ukagovana email yako kero munyaya iyo unogona kuwana dzimwe nguva ma-mail kubva kwatiri ane chokuita nemishandira yatinopa. Kana iwe usingadi kugamuchira e-mail dzakadaro tipei kutiudza info@itstechschool.com uye iwe haungagamuchiri chero hupi zvamangwana emaizai kubva kwatiri.
Innovative Technology Solutions yakagadza vatengesi vekutengesa kupa ruzivo uye maonero kune mibvunzo. Paunobvunzurudza neITS, mhinduro yedu ichakopwa kune Vamiririri veunharaunda yako uye iwe ungagamuchira mairi kubva kwavari kupa kupa kupa ruzivo rukuru.
Pamusana pokutengesa uye emafaira ekutsvaga motokari yemapikisi inoshandisa spam filters, zvingave zvichiita kuti email yedu ingasaiti nguva dzose kusvika kwauri. Kuti tive nechokwadi chokuti mibvunzo yedu haifaniri kuenda pasina kutarisirwa, tinotumira email yekutevera (kushandisa imwe kero ye email admin@itsgroup.in in case we do not receive a read report or a reply to our email.
Innovative Technology Solutions inoshandisa makiki, pixels ekutsvakurudza uye hukama hwehutano. Tinoshandisa makiki akaiswa nesu kana vatatu kune zvinangwa zvakasiyana-siyana kusanganisira kushanda uye kuchinja webhusaiti. Uyewo, makiki anogona kushandiswa kuongorora kuti iwe unoshandisa sei nzvimbo kuti utsvake matanho kwauri pane mamwe mawebsite.
Zvose zvikwereti zvekwereti / madhenari uye ruzivo rwemunhu wega unozivikanwa haCHIDZIDZWA, kutengeswa, kugoverwa, kukodzwa kana kukodzwa kune imwe yevatatu.
IWebsite Policies neMitemo & Zvigaro zvinogona kuchinjwa kana kuchinjwa dzimwe nguva kuti zvizadzise zvinodiwa nemitemo. Saka Vatengi 'vanokurudzirwa kuti vawanzoshanyira zvikamu izvi kuitira kuti vaongororwe pamusoro pekushandurwa kwewebsite. Kugadziriswa kuchave kushanda pazuva ravanoiswa.
Zvimwe zvezviziviso zvaunoona paSutu zvinosarudzwa uye zvinotumirwa nevakasununguka, zvakadai semashambadziro emashambadziro, masangano ezveshambadzi, vatengesi, uye vateresi vezvikamu zvevateereri. Aya mapato matatu anogona kuunganidza ruzivo pamusoro pako nemabasa ako ari paIndaneti, kana paIndaneti kana kune mamwe mawebsite, kuburikidza nekiki, web beacons, nemamwe magetsi muedza kuchinzwisisa zvaunofarira uye kukupa iwe zviziviso zvinokodzera zvaunofarira. Ndapota yeuka kuti hatina kuwana, kana kudzora, ruzivo rwevanhu vatatu vanogona kuunganidza. Nzira dzekudzidziswa kwevanhu ava vatatu hazvifukidzwi nemutemo wepabonde.
Kusawirirana chero kupi zvako kana kubvunzurudza kunobuda kunze kana kuenderana newebsite ino kunotungamirirwa nekugadziriswa maererano nemitemo ye INDIA
India ndiyo nyika yedu yekugara.
Kana iwe uchipa mubhadharo wezvibereko zvedu kana mazano pane webusaiti yedu, zvinhu zvaunokumbirwa kutumira zvichagoverwa zvakananga kune mupiro wekubhadhara kuburikidza nehutano hwakachengeteka.
Muchengeti wekadhi anofanira kuchengetedza kopi yekutengesa zvinyorwa neMatongerwo emabhizimisi nemitemo.
Tinobvuma mari yekutsvaga paIndaneti tichishandisa Visa uye MasterCard chikwereti / debit kadi mu USD, GBP, EUR, AED & INR mari.
Kamwe chete mari yekunyora inobhadharwa hapasisina kubhadharwa.
Zvikwereti zvekhosi hazvizobhadharwi.
Kubhadharwa kuchaitwa chete kuburikidza neChinzira Chekubhadhara Chayo.
Nzira dzemari dzinogona kubhadharwa kana tikawana mhinduro mumaawa ekutanga e4 ekudzidziswa.